Dustless blasting Machine - China Qingdao Antai Heavy Imboni
I dustless blasting umshini isetshenziselwa zonke bafaka emhlabeni, ezifana, Automative, Marine, Reginery, Fleet izimoto, Graffiti ukususwa, umugqa Ukususwa, imishini esindayo, Surface yokuhlanza, Powder enamathela, Offshore, Izinkuni sokubuyiselwa, asbhestosi Abaement.
imishini yethu blasting dustless ngokuyinhloko yakhelwe futhi kuhlanganiswe ezahlukene Imibhobho esemzimbeni, nezinamathiselo kuqhuma ezimanzi, yangaphakathi ipayipi yokuhlanza amadivayisi, uthuli blasting khulula amakhanda, olwalwenza Idivayisi yokulawula.
blasting Dustless ibona izidingo embonini futhi imishini yethu unikele zonke izici ukuthi ukusetshenziswa professional kudinga. Zonke imishini kungenziwa umshini wokuphehla yakhelwe kahle futhi kungase kutholakale yocezu olulodwa elawulwa kude muntu ofile wavuka inkinobho futhi silencer okuyinto kakhulu ukunciphisa zabasebenzi Izindleko, ngcono ukusebenza kahle ka olwalwenza, ukusebenza kanye nokuphepha.
Imishini zakhiwa for lungene 150 PSI ingcindezi ukusebenza. I womoya olwalwenza elawulwa kude umphini ingafinyelela opharetha ukumisa noma uqale.
~ Amahora 2-3
~ Amahora 4-6
Usayizi (H / W / D)
Ukuqhumisa hose obuphelele
(2). Imfuneko umoya compressor
4-10 ibha, 60-3755 CFM, 30-150 PSI, 0.2-1.0 MPA
A. Blast hose (Inner ubukhulu kuyinto 32mm)
C. Tungsten Carbide umlomo wombhobho (ubukhulu kuyinto 10mm)
D. Gcwalisa uphondo
E. Lifetime iwaranti kuqhuma imbiza
izinga 1.High ebusweni ukubukeka
2.High ukukhiqiza kahle
5.Lower ukusetshenziswa olwalwenza
8.Not ezidingekayo ukumisa imisebenzi eseduze.
9.Removes sikala okwesikhathi upende ebusweni ngomumo.
10. Idinga kuphela isikhala yokupaka
11. Ingabe hhayi wafiphaza metal
12. Ihamba surface primer-ngomumo
13. Easy ukuhlanza
14. Ivimba nokugqwala amahora 72
I Dustless blasting umshini Umdwebo inqubo
I Dustless umshini blasting yokuhlanza ebusweni kahle
I Dustless ukuqhumisa inqubo ukulethwa
I dustless umshini blasting imininingwane izithombe - DB150 & DB225 & DB500 & DB800
amakhasimende e-Australia wavakashela embonini yethu, wabheka Blaster dustless
Okulandelayo: isihlabathi ukuqhumisa idokodo
Abrasive ukuqhumisa Igumbi
Air Blast zamagumbi
Okuzenzakalelayo Blast Machine
Sobuhlalo ukuqhumisa Machine
Best Quality Dustless ukuqhumisa
Blast Yokuhlanza Machine
Ukuqhumisa Yokuhlanza Igumbi
ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
Ukuqhumisa Embizeni Machine
Ekubunjweni Industrial Machine Shot ukuqhumisa
Uthuli Mahhala ukuqhumisa Machine
Uthuli-Mahhala Sandblasting Machine
Dustless Blast IKhabhinethi
Dustless ukuqhumisa Izindleko
Dustless ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
Dustless ukuqhumisa Izinsiza kusebenza For Sale
Ukuqhumisa Dustless Machine Inani
Dustless ukuqhumisa Hambayo
Kwangaphandle Pipe ukuqhumisa Machine
Factory yokuthengisa okuqondile Blast Embizeni
Grit ukuqhumisa IKhabhinethi
Grit ukuqhumisa Machine
Grit ukuqhumisa Igumbi
High Pressure ukuqhumisa Embizeni
High Pressure Water ukuqhumisa Machine
High Quality ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
Pipe sangaphandle ukuqhumisa Machine
Pipe Yangaphakathi ukuqhumisa Machine
Ingcindezi ukuqhumisa Embizeni For Sale
Rotary yenkomba Uhlobo ukuqhumisa Machine
San ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
Small ukuqhumisa Machine
Steel Grit ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
Steel Pipe ukuqhumisa Machine
Ezisetshenzisiwe Water ukuqhumisa Izinsiza kusebenza For Sale
Ezisetshenzisiwe Wet ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
Umshini ukuqhumisa Machine
Amanzi ukuqhumisa Machine
emanzi ukuqhumisa Izinsiza kusebenza
emanzi ukuqhumisa Machine